Maamulka Hirshabelle oo dib u soo celiyay sarkaal uu magacaabay Fahad Yaasiin – Bandhiga
Maamulka Hirshabelle oo dib u soo celiyay sarkaal uu magacaabay Fahad Yaasiin
Maamulka Hirshabeelle ayaa Magaalada Jowhar ee Xarunta Maamulkaasi waxaa uu ka soo celiyay sarkaal noqonaya Taliyaha Nabad sugidda ee Gobolka Shabeellaha dhexe.
Sarkaal katirsan mamulka Hirshabelle ayaa u sheegay warbaahinta inuu Magacaabay Fahad Yaasiin nin lagu magacaabo Ceynte,kaas oo uu doonayay in uu noqdo Taliyaha Nabad Sugidda ee Gobolka Shabeellaha dhexe.
Ceynte waxaa lagu beddelay Macallin Aadan oo ah Taliyaha hadda ee Nabad Sugidda kaas oo uu magacaabay Maxamed Cabdi Waare.
Waare ayaa horay xilka uga qaaday C/Qaadir Xaayow oo Taliyaha Nabad Sugidda ee Shabeellaha dhexe ahaa,waxaana magacaabista Macallin Aadan ka biya diiday Fahad Yaasiin oo ah Taliye ku xigeenka Nabad Sugidda Soomaaliya.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Hirshabeelle ayaa u xaqiijiyay in Fahad Yaasiin uu diiday in uu la shaqeeyo Taliyaha uu magacaabay Waare ee Macallin Aadan,waxaana uu go’aansaday in uu magacaabo Ceynte oo maanta laga soo celiyay Jowhar.
Mas’uul u hadashay maamulka Hirshabelle waxay sheegeen in amaanka Gobolka iyo Ciidamadaba ay mas’uul ka yihiin maamul ahaan lana soo magacaabi karin Saraakiil ciidan oo aysan ka warqabin.
Saraakiisha Ciidamada ee la soo celiyo waxaa ay horay uga dhici jirtay Maamulka Jubaland,laakiin Maamulka Hirshabeelle ayaa maanta go’aan la mid ah kii Jubaland ku dhaqaaqay.